"သူကငါ့ကိုချစ်သောသူ. သူကငါ့ကိုမချစ်တော်မူ၏။ "—anonymous
တိုင်းမိန်းကလေးကဒီကောင်လေးရက်စွဲပါဖြစ်ပါတယ်. သူကနွေဦးရာသီအတွက်ဓာတ်မတည်ကဲ့သို့ဘုံင်. Ladies, သင်ကဇာတ်ညွှန်းကိုသိ ...
သူကမြက်ပင်သည်အခြားဘက်မှာစိမ်းလန်းတယ်လို့ထင်ခဲ့တဲ့. ဒါမှမဟုတ်သူက "သူ့အအာကာသလိုအပ်ခဲ့ပါတယ်။ " ဒါကြောင့်, အများကြီးသတိပေးချက်ကိုမပါဘဲ, သူပင် Houdini မာနထောင်လွှားစေလိမ့်မယ်လို့တစ်ဦးပျောက်ကွယ်လုပ်ရပ်မ.
သင်သည်ဟစ်ကြော်. သင်သည်အဘယ်ကြောင့်အမေးခွန်းထုတ်. ထိုအခါနောက်ဆုံးမှာ, သင်တို့စပ်ကြားအချို့သောအချိန်နှင့်အကွာအဝေးနှင့်အတူ, သင်သည်သင်၏နှလုံးရောဂါကိုငြိမ်းစေနဲ့အပေါ်ကိုရွှေ့ဖို့စီမံခန့်ခွဲ.
သင့်ရဲ့အံ့အားသင့်စရာအများကြီး, လများ / နှစ်ကြာပြီးနောက်သူပြန်လာ. အနီရောင်နှင်းဆီပန်းနှင့်အတူဤအချိန်, ခွင့်လွှတ်ခြင်းအဘို့အအသနားခံ, နှင့်မီးလောင်ဆန္ဒအဟောင်းမီးတောက်များ rekindle မှ. ကြိမ်ဖန်များစွာ, သင်အသစ်များတစ်စုံတစ်ဦးအတွက်စိတ်ဝင်စားဖြစ်လာပါတယ်ပြီးနောက်.
အဆိုပါ 64,000 မေးခွန်းဖြစ်လာသည် ... သင်ကသူ့ကိုနောက်ကျောယူသင့်သ, သို့မဟုတ်သင်အနာဂတ်အတွက် ပို. ခေါင်းကိုက်ခြင်းနှင့်ကြေကွဲစရာအဘို့အတွင်ရှိ?
ကောင်းစွာ, အားလုံးမူတည်ပါတယ် ....
ဒီမှာ cheat sheet တစ်ခု Guidelines အဖြစ်အသုံးပြုရန်ရဲ့.
သူချိန်းတွေ့၏ Cardinal စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတဦးကိုချိုးခဲ့ပါသ? ဤသင့်ရဲ့အကောင်းဆုံးမိတ်ဆွေနှင့်အတူကိုလိမ်သို့မဟုတ်ဆွေမျိုးတူမ nos လိမ့်မည်, သို့မဟုတ်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုများ, ဒါမှမဟုတ်သင့်ရဲ့ယုံကြည်မှုကိုချိုးဖောက်. ထိုသို့ဖြစ်လျှင်, "သွားမလွန်ပါနဲ့။ "
သူ့ကိုရင့်ကျက်, ဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့နှင့်အတူဝေါဟာရများငှါလာကြပြီအဖို့လုံလောက်သောအချိန်ရှိခဲ့သည်? သူတကယ်မိမိအကျင့်တို့ကို၏လမ်းလွဲစေသောအသိအမှတ်မပြုပါဘူး? သို့မဟုတ်သူအကျွမ်းတဝင်အရာတစ်ခုခုအတွက်ပဲတောင့်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်?
အဘယ်ကြောင့်သူဆက်ဆံရေးပြန်လည်ပြုပြင်ခြင်းစေလိုပါဘူး? သင်၏နှစ်ခုအကြားရှိဓာတုဗေဒတစ်ချိန်ကပြင်းသောကြောင့်ဖြစ်သည်? သူသည်ငွေကြေးသို့မဟုတ်နေထိုင်ဖို့နေရာချေးဖို့လိုအပ်ပါသလဲ? အဆင်ပြေသက်သာပေါင်းဖို့အကြောင်းပြချက်ကောင်းဘယ်တော့မှမဖြစ်. သူ့ရဲ့နောက်ကျောလာမယ့်သင်တို့အဘို့ပြန်ဆုတ်အဖြစ်ဆောင်ရွက်စေတော်မမူပါနှင့်.
သူဘယ်လိုအမှုအရာကိုအဆုံးသတ်ခဲ့ပါ? မိမိအ method ကိုအအေးနဲ့စာနာထောက်ထားမှုခဲ့သည်? သို့မဟုတ်မျိုးကိုနဲ့ non-အပြစ်တင်? ဥပမာအားဖြင့်, အားလုံးဖုန်းကိုအဆက်အသွယ်အဆုံးသတ်အားဖြင့်ရုတ်တရက်အပေါင်းတို့၏သူရဲဘောနည်းသည့်လမ်းကြောင်းတွင်ယူသောသူယောက်ျားတွေ, ဒါမှမဟုတ်သင်အရာသည်နောက်တဖန်နှင့်အတူတက် hooking မရှိသလောက်မြတ်ကြ၏အဆုံးသတ်တဲ့စာသားမက်ဆေ့ခ်ျ.
သူ့ကိုအကြောင်းကိုပိုမိုကောင်းသောအရာမကောင်းတဲ့ရှိကြ၏? တစ်ဦးအကောင်းအဆိုး cons စာရင်းလုပ်ပါထို့နောက်ကိုပညာရှိစွာနဲ့ဓမ္မဓိဋ္ဌာန်ကျကျကနှင့်တိုင်ပင်ဆွေးနွေး. အရေးအကြီးဆုံးကတော့, မာယာအန်ဂျလို၏ပညာရှိအကြံဥာဏ်ကိုဂရုပြု: "လူတွေကသူတို့နေသောသင်ပြသည့်အခါ, သူတို့ကိုကျနော်ယုံကြည်ပါတယ်။ "
သင့်ရဲ့ပြိုကွဲ၏ပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေများအချိန်ကိုက်ဖြစ်သကဲ့သို့အညီအမျှအမျှအရေးကြီးသော. သူမှန်ခရစ်စမတ်မတိုင်မီထုတ်ကယ်တင်ရန်ခဲ့ပါ? သင်နေမကောင်းဖြစ်လာတယ်သို့မဟုတ်လှဲသင့်ကံဇာတာအပေါ်ပြီးနောက်? "တရားမျှတ-ရာသီဥတုမိတ်ဆွေများ" နေသောပြည်သူ့မရှိသလောက်ခက်ခဲတဲ့အချိန်တွေမှာအပေါ်ထင်မှတ်နိုင်ပါတယ်. ထွက်တွေ့ကြပြီဟုမှကံကောင်းကိုယ့်ကိုယ်ကိုစဉ်းစားကြည့်ပါ, ဤကိစ္စတွင်ပါလျှင်. သင့်ရဲ့ဆုံးရှုံးမှုတွေခု​​တ်ဖြတ်.
ကိုယ့်သေးရှမ်ပိန်မျက်မှန်ကိုထုတ်မချိုးပါနဲ့. အတူ "probationary ကာလ" တွင်သူ့ကိုကျောတာကိုစဉ်းစားကြည့်ပါ "ကန့်သတ်သုံးစွဲခွင့်။ " အကောင်းဆုံးရလဒ်ရရှိ, ယုံကြည်မှုယူဆဘူး "ရရှိခဲ့ပါတယ်" ဖြစ်သင့်သည်.
သင်ထဖဲ့သောအခါ, အတွက် chiming လူဦးသံပြိုင်ရှိ၏, "ကိုယ့်ကိုယ်ကိုငါပြောပြီ?" လူတိုင်းသူသည်သင်၏မထိုက်တန်ခဲ့သည်ဟုထင်လျှင်, ဒီနေရာမှာပွိုင့်ရှိစေခြင်းငှါ. ပေါ့ပေါ့တန်တန်ဒီထုတ်ပယ်မထားပါနဲ့. ချစ်ခြင်းမေတ္တာကပင်မျက်စိကန်းစေနိုင်ပါတယ်သော်လည်း, ဒါကြောင့်လည်း clueless ဖြစ်ဘယ်တော့မှမပေးသင့်.
ဆရှင်းရှင်းလင်းလင်းရှိပါတယ်တဲ့အခွင့်အလမ်းမယူသည့်အခါမကောင်းမှုကစားနိုင်ပါတယ်. သင်လက်ရှိအလားအလာဝန်ခံကတိပြုပါသည်မူကြောင်းကိုအခြားဆက်ဆံရေးအတွက် Are? ဤအခြေအနေ၌, ကို "တစ်ကျော့ပြန်ဆိတ်သငယ်ကို" မှပြန်လာခွင့်မပေးသင့်!
ထို Boomerang Boyfriend နှင့်ဆက်ဆံရာတွင်ဤအချိန်မီအကြံပေးချက်များကိုစဉ်းစားပါ. "အတိတ်ထဲကနေလေ့လာသင်ယူရန်ပျက်ကွက်သူများသည်ကပြန်လုပ်ပါရန်ပို့ဆောင်ကြသည်။ " အဲဒီစိတ်ကိုသိမ်းထားခြင်း